Mkpụrụ osisi ndị ọzọ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Mkpụrụ osisi ndị ọzọ
Utu esi kpo oku azu, uzo ozo nke nchacha n'ulo
Enwere ike ịchọta azụ azụ n'ọtụtụ ụlọ ahịa, ma ezigbo ndị hụrụ n'anya na-ahọrọ ịme nri dị otú ahụ n'onwe ha. A sị ka e kwuwe, ọ bụ nanị site n'iji aka gị kwadebe efere, ị nwere ike inwe obi ike zuru oke na nchekwa ya. Ma iji mee ka azụ dị ụtọ, ị ga-ama ụfọdụ iwu na ihe nzuzo nke nkwadebe ya.
Mkpụrụ Guava - uru bara uru, kalori, esi eri
Onye na-emebeghị ihe ọ bụla, ọ ga-eju anya ịnakwere nkwupụta ahụ bụ na mkpụrụ a bụ "eze nke mkpụrụ osisi". Ka anyị lebakwuo anya na ya ma chọpụta ihe guava mkpụrụ bụ na ihe Njirimara ndị mmadụ dị ka osisi a. Calorie na nutritional value.Ga na-ele anya na-enweghị atụ: na mkpụrụ osisi ahụ dịka apụl ma ọ bụ ube, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ acha, kpuchie ya na tubercles.
Kedu ihe iji feijoa mee maka ahu nwanyi?
Nanị afọ iri atọ gara aga, a na-ewere mkpụrụ osisi okpomọkụ dị ka ngwaahịa dị ụkọ. Ụdị dị iche iche dị ugbu a na ahịa na nnukwu ụlọ ahịa ga-amasị ọbụna ndị na-achọ ahịa. Iji nweta uru kachasị uru site na ngwaahịa ndị a, ị ga-enwe ike ịhọrọ ha ma mara ihe ndị a kapịrị ọnụ nke mkpụrụ ọ bụla. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya na mkpụrụ osisi okpomọkụ nke feijoa - ihe bara uru, ihe ịchọ mma na nri nri, yana ntụziaka.
Purato Potato: Njirimara bara uru
Otu esi egbutu ube na mmiri
Ihe niile gbasara ihe mere phalaenopsis orchids ji gbanwee odo edo na ihe ha ga-eme iji zọpụta ha
Ndị isi kọmpụta mesoro Rhododendron: Njirimara, imegide na foto nke mma mara mma
E nwere ike inye ọgwụ na-eme ka ndị na-enweghị ọgwụgwọ mee ihe
Ọ nwere ike ifriizi hawthorn maka oyi, n'ụlọ na-enweghị nkà pụrụ iche na blanks?
Ose maka oghe ala: ihe kacha mma
Mkpụrụ vaịn dị iche iche "Furor": nnukwu tomato na nguzogide oyi nke mkpụrụ vaịn ojii